Wajigaaga Miin hadii uu yeeshay sidaan Iskaga dhig gabar yar-VIDEO - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa jira dad badan oo iskala yaaban wejiga laalaabato ay ka yeeshaan ama muuqaalkooda oo isbadala islamarkaana dhalin aanay gaarin qabanayso taasi oo aan talo iyo dawo kaaga hayso wacdaraha .
1)Waxa aad raadisaa Qudaarta gaar ahaan dhareerowga ama Baamiyaha Oo culimada caafimaad wacdaraha la soo tashatay ay inoo cadeeyeen in Vitamin “C” laga helo maqaarkana dhalaaliya oo ka dila qolfaha ay wadato bakteeriyada da’da dhabanada keenta.
Baamiyaha waxaad u isticmaashaa sida kareenka oo kale adiga oo ku daliigaya dhabanadaada ka hor inta aadan qabees galin aroorta hore.
2)Waxa aad muhiimada saartaa Karootada : laalaabnaanta wajiga waa arimaha ugu daran ee haweenka wel weliya , iyadoo cunista karootada ay la dagaalameyso laab laabka , waxa ayna xoojisaa maqaarka .
Hadaba wacdaraha.com waxa ay ugu bishaaraynaysaa dumarka badan ee ku daalay isticmaalka Timirta xiliga ay is qurxinayaan in ay isbadal wayn isku arki doonaan ka dib qaadashada labadan dawo.